အလုပ်အကိုင် Archives - Page2of3- Myanmar News Plus
၀န်ထမ်း ကို တာဝန်က ရပ်စဲသင့်တဲ့ အချက် ၈ ချက်
မန်နေဂျာ၊ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ဟာ ၀န်ထမ်းတွေအလုပ်မှာမြဲဖို့ လုပ်ရတာတင်မကဘဲ ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရှိရင် ၀န်ထမ်းတွေကို အလုပ်ကရပ်စဲရတာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်း တွေကို စိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ အထက်လူကြီး ရဲ့ စရိုက် (၇) မျိုး
အထက်လူကြီး နဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေကြောင့်ပဲ လုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်နိုင်သလို အချိန်မရွေးလည်း ရှုံးနိမ့်သွားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ဒီလို ဆိုးရွားတဲ့ အထက်လူကြီးတွေ ရှိနေရင်တော့ ဝန်ထမ်း တွေက အလုပ်မှာ တက်ကြွမှု ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ တခြားလူတွေနဲ့ အလုပ်တွေတွဲလုပ်ရတဲ့အခါ ဘာသတိထားမိလဲဆိုရင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပီသတဲ့သူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ သိပ်စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းတယ် ဆိုတာပဲ။
ကိုယ်အလေးချိန် တက်စေတဲ့ အလုပ် ၈ မျိုး
အလုပ်မ၀င်ခင်ကပိန်ပိန်လေး ခုမှဝလာတယ်လို့ မကြာခဏငြီးတွားသံကို ကြားဖူးကြပါသလား။ အထိုင်များတာနဲ့မဆိုင်ဘဲ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အလုပ်တွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ပိုတက်စေပါတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့်အလုပ် ၈ မျိုးထဲက တစ်မျိုးမျိုးကို သင်လုပ်နေရင်တော့ ကိုယ်အလေးချိန်ပိုတက်လာမှာသေချာပါတယ်။
ဝန်ထမ်း များအတွက် ဥပမာပုံပြင်
လူနှစ်ယောက် ကွင်းပြင်ကြီး တစ်ခုထဲမှာတစ်ယောက်ကကျင်းတွေတူးပြီးနောက် တစ်ယောက် က အဲဒီ့တူးပြီးသားကျင်းတွေထဲကိုမြေကြီးတွေပြန်ဖို့နေကြတယ် ။
သူတို့ နှစ်ယောက် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်နေတဲ့ အခြားသူ တစ်ယောက်က မနေနိုင်တော့ဘဲ . .ခင်ဗျားတို့ နှစ်ယောက် တစ်ခုခုတော့ လွဲနေပြီတစ်ယောက်ကကျင်းတူးတယ်
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်း တွေရဖို့ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်မလဲ..
လက်ရှိအချိန်ဟာဆိုရင် ပညာခေတ်ကိုရောက်ရှိလို့လာနေပါပြီ ။ ကိုယ် ကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ အတတ်ပညာ တစ်ခုရှိမထားရင် လစာကောင်းတဲ့ ၊ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းတွေတိုးတက်ဖို့ အလုပ်အကိုင်မျိုးရရှိဖို့ မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။ အခုချိန်ကစပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာကို ဒီအချက်လေးတွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင် ……….
အလုပ်သင် တစ်ယောက်ကို မြန်မာငွေ သိန်းတစ်ရာကျော် ပေးတဲ့ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ
နိုင်ငံတကာက ဘွဲ့ ကြိုကျောင်းသားတွေဟာ ဘွဲ့ မရခင်နဲ့ နွေရာသီအားလပ်ရက်များအတွင်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ အလုပ်သင်အဖြစ် အလုပ်ဝင်ကြပါတယ်။ အလုပ်သင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝင်ငွေလည်းရ ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံလည်း ယူပြီး ဖြစ်လို့ အားပေးထိုက်တဲ့ ကိစ္စလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်အကိုင် မပျက်ဘဲ ဘဏ်လုပ်ငန်း တွေအားလုံး လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် Internet Banking အကြောင်း
အင်တာနက်ရှိရုံနဲ့ ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်နေနေ ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ Internet Banking ကိုအသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်လိုက်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ငြီးငွေ့ဖွယ် လုပ်ငန်းခွင် အတွက် ကုထုံး
နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းရှင်သန်နေရတဲ့ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်နေ့မဟုတ် တစ်နေ့တော့ ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်ကို ငြီးငွေ့လာတတ်ပါတယ်။ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်နေရတဲ့တိုင်အောင် ပုံမှန် လည်ပတ်နေတဲ့ သမားရိုးကျနေ့ရက်တွေ ကိုတစ်ခါတစ်ရံမှာငြီးငွေ့လာတတ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ငြီးငွေ့မှုကို ကုသဖို့အတွက်ဘယ်လို ကုထုံးကို အသုံးပြုသင့်သလဲ။ ဆက်ဖတ် ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်း ဖြစ်လာဖို့
ဟိုးအရင် နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်က အစိုးရဌာန တစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်လုပ် ခဲ့ဖူးတယ်။ ခုနှစ်အားဖြင့် ဆိုရရင် ၁၉၈၆ ခုနှစ်က ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ကာလက ကျွန်တော်ဟာ ဘွဲ့ရပြီး အသက် နှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်ကျော် အရွယ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဘွဲ့ရပြီးပြီဆိုတော့ အလုပ်လုပ်ရမယ်ပေါ့။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက ဘာဈေးကွက် စီးပွားရေးမှ မရှိသေးသလို ဘယ်ကုမ္ပဏီမှလည်း ပေါ်မလာ ခဲ့သေးပါဘူး။